Archives des Fanentanana | Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
Catégorie : Fanentanana
Fanentanana / Vaovao
Soridalana iombonan’ny AFAFI-FET ho an’ny taona 2017 – 2018
Miditra ny taona faharoa amin’ny fiomanana amin’ny fankalazana ny faha 100 taona niorenan’ny FET eto Madagasikara isika amin’izao taom-pikatrohana izao izay antsointsika hoe: Taonan’ny Tenin’Andriamanitra. Tsara ny manamarika fa tsy ny teny Faneva ihany...
AFAFI / EKA / Fanentanana
Ny fizotry ny fampiasam-panahy
Raha ny fizotry ny Fampiasam-panahy kosa no resahina dia mizara ho Herinandro efatra mazava tsara ny fomba entina miatrika sy manatanteraka azy. Ny Herinandro Voalohany [FP. 21 – 90] Ny Herinandro Voalohany dia...
Ny fampiasam-panahy sy ny dingana ao amin’ny EKA
Ny Aim-panahy iveloman’ny AFAFI-FET dia mifototra indrindra amin’ny Fampiasam-panahin’i Md Ignasy avy any Loiola. Notakarina avy amin’ny Fampiasam-panahin’i Md Ignasy. Mifototra indrindra amin’ny atao hoe Fampiasampanahy ny AFAFI FP= Fanazaran‐tena hivelona amin’ny ny Vavaka,...
Fanentanana / Vavaka
Ireo fanontaniana tsara apetraka mandritry ny fandinihan-tena
Loharano : ZENIT Taorian’ireo fanontaniana telo fanombohana dia miroso amin’ny lalina kokoa ny fandnihan-tena. Hoy ny Tompo : “Tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra” Mirona mankany amin’Andriamanitra tokoa ny foko ? Tiako mihoatra...
Katesizin’i Papa Fransoa mikasika ny famindram-po
Ry rahalahy sy anabavy, nosokafana teny anivon’ireo katedraly isan- diosezy ny varavarana masina ny alahady 13 desambra farany teo, hahafahan’ireo maro an’isa miaina ny jôbilin’ny famindram-po ary mba ho taratry ny fitiavana sy ny...
Fantaro ny taonan’ny famindram-po
Hanomboka amin’ny 8 desambra 2015 ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 20 novambra 2016 ny Jôbily manokan’ny famindram-po. « Mpamindra fo tahaka ny Ray », notsoahina tao amin’ny Lk, 6-36, io ny teny ho enti-miaina sy...
Laudato si, ho fiarovana ny fonenana iombonana
Hiatrehana ny faharavan’ny tontolo iainana ny Laudato si « Hoderaina anie ianao ry Tompoko » io no lohatenin’ny ansiklika navoakan’ny Papa Fransoa tamin’ny 24 mey 2015 lasa teo. Ho fiarovana ny tany, fananana iombonana no votoatin’ny...
Fanentanana / Fiofanana
Manome rà, manome aina
Mitsinjara ny «oxygène » manerana ny vatana manontolo ny rà. Izy ihany koa no manaparitaka ireo singa marobe ilain’ny vatana. Na eo aza anefa ny fivoaran’ny teknôlôjia dia mbola tsy afaka manamboatra rà ny zanak’olombelona...
Firotsahana an-tsitrapo, fototry ny fahombiazana
Sahirana amin’ny fitadiavana asa ny ankamaroan’ny tanora ankehitriny. Na dia manam-pahaizana aza izy ireo dia olana ny fangatahan’ny toeram-piasana traikefa. Manentana antsika hivavaka ho an’ireo mpirotsaka an-tsitrapo sy ireo olona atao an-jorombala sy ihatahan’ny...
Alalino ny fahaiza-mihaino
Loharano : Jean-François Guéodon – Journal du Net Beazina isika mba hahay hihaino. Oham-piainana atolotra antsika i Masina Maria sy i Md Zôzefa. Ireto ary misy mpandinika vitsivitsy hanampy antsika andalina ny fahaiza-mihaino. ———- « Mamafy...